घट्यो सुनचाँदीकै भाउ, तोलाको कति ? – 8 Kbiz
घट्यो सुनचाँदीकै भाउ, तोलाको कति ?
07/01/2020 kcLeaveaComment on घट्यो सुनचाँदीकै भाउ, तोलाको कति ?
निरन्तर बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्य आज (मंगलबार) भने घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजोको तुलनामा आज सुन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँ र चाँदी २० रुपैयाँले घटेको छ ।
नेपाली बजारमा आज छापावाला सुन ७५ हजार ५ सय र तेजाबी सुन प्रतितोला ७५ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, हिजो (सोमबार) प्रतितोला ९२० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज भने प्रतितोला २० रुपैयाँले घटेर तोलाको ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको छ । सुनको मूल्य बढेर सोमबार तोलाकै ७६ हजार पुगेपछि व्यापार लगभग शून्यजस्तै भएको व्यापारीहरू बताएका छन् । तर आज अलिअलि सुनचाँदीकै भाउ घट्दा उपभोक्तालाई भने केही राहत महसुस भएको छ ।
व्यवसायीका अनुसार चीन–अमेरिकाबीचको व्यापारका विषयमा गत डिसेम्बरमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदा चिनियाँ लगानीकर्ताले पनि सबैभन्दा बढी लगानी सुनमै बढाएका छन् । त्यसको असर विश्व सुन बजारमा परिरहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसको असर नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्तिमा पनि परेको छ ।
यही अवस्थामा सुनको माग बढ्दै जाँदा विश्व बजारमा पनि माग झनै बढ्ने र भाउ पनि आकाशिँदै जाने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीका अनुसार सुनको भाउ बढेसँगै सुन किन्ने भन्दा बेच्ने बढी आउने गरेका छन् ।
कर्णालीका पाँच हजार युवाले यस वर्ष रोजगारी पाउने ।
काँग्रेसले छान्यो राष्ट्रियसभाका १६ जना उम्मेदवार (नामावलीसहित) ।
19/01/2020 19/01/2020 kc
नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया (पुस ११)